Terror Free Somalia Foundation: Saraakiil iyo ciidan beesha mareexaan ah oo kusoo qul qulaay
Saraakiil iyo ciidan beesha mareexaan ah oo kusoo qul qulaay
Kadib markii beesha mareexaan ay ku guuleysteen inay noqdaan Raaisal Wasaaraha xukuumadda kmg ee Soomaaliya ayaa waxay bilaabeen inay kusoo qul qulaan caasimadda dalka Soomaaliya ee muqdisho.
Rag iskugu jira saraakiishii hore ee ciidamadda qalabka sida iyo ciidamo kale oo iskugu jira kuwii xilligii dowladdii Allaha u naxariistee Jaalle maxamed Siyaad Barre joogay iyo kuwii soo baxay dowladiisa kadib ayaa waxay soo gaareen caasimadda dalka Somaliya ee muqdisho.
Saraakiisha qaarkood ayaa waxaa la-sheegay inay ka kala yimaadeen dalka dibadiisa, sida Kenya, Itoobiya iyo Carabaha, halka qaarkoodna la-sheegay inay ka kala yimaadeen gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Saraakiishaan ayaa waxaa la-filaayaa inay noqon doonaan kuwo u daacad ah Raaisal Wasaaraha cusub ee dowladda kmg ee Soomaaliya mudane maxamed C/Laahi maxamed (Farmaajo), isla-markaana ay ku shaqeen doonaan sida kaliya ee uu doonaayo.
Amuurtaan ayaa waxay kusoo aadeysaa xilli madaxweynaha dowladda kmg ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu Raaisal Wasaaraha xukuumadda kmg uu u magacaabay Soomaaliya mudane maxamed C/Laahi maxamed (Farmaajo), isla-markaana kasoo jeedaa beesha Mareexaan.